ILayibrari yeSizwe yaseSpain icela uvimba weSangqa sabaFundi | Uncwadi lwangoku
Ukukhanya kuvuliwe kukujikeleza ikamva leCírculo de Lectores, iThala leNcwadi laseSpain licele ukuba indawo yokugcina iklabhu idluliselwe kuyo ukuze igcinwe
UJuan Ortiz | | Iintlobo, Ilizwe ledijithali, Izaziso, Ezahlukeneyo
ILayibrari yeSizwe yaseSpain ifuna ukugcina amalungelo e-Circle of Readers.
Emva kwe- IGrupo Planeta izakubhengeza ukuvalwa kweCírculo de Lectores Phantse kwinyanga ephelileyo - ebanga ukuba "Imodeli yendlu ngendlu ayisasebenzi kwaye siza kuyidibanisa nokuthenga kwidijithali" - isibane sikhanyisiwe malunga nokugcinwa koovimba beklabhu ebalulekileyo.
ILayibrari yeSizwe yaseSpain (BNE) -emva kokufumanisa ngokupapashwa kwephephandaba El País ukuba amagqwetha eCírculo de Lectores azise inxenye yabo baphethe amalungelo ezinto (phakathi kwabo abaphathi bakaMario Vargas Llosa noFrancisco Ayala) ukuba bazokwenza "intshabalalo yenxalenye" ​​yeekopi zabo isebenza -Ucele ukuba zonke iincwadi ezikwingqokelela zigqithiselwe kuye ukuze amkhusele, amkhathalele kwaye ayisebenzise.
1 I-BNE ikulungele ukukhusela zonke ii-asethi ze-CL
2 UGrupo Planeta uthethile
3 Umhlolokazi wombhali uFernando Ayala naye uphakamise ilizwi lakhe
4 Amanzi azolile
I-BNE ikulungele ukukhusela zonke ii-asethi ze-CL
Oku kusabela kwinxalenye ye-BNE kungaphezulu kokuqiqisa. Sithetha ngeCírculo de Lectores yayiyeyona klabhu yokufunda inkulu kwezakha zakho kwilizwe laseSpain. Kwaye ukuba ngesigqibo sokuvala bekukho impikiswano enkulu, ngoku kukho ukudideka okukhulu kunye nenkxalabo kuba yenzelwe ukutshabalalisa enye yeerekhodi ezibanzi nezibalulekileyo ezibonakalayo kwimbali yolwimi lwaseSpain lwakutsha nje.
Wonke umntu uyazi ukuba iGrupo Planeta yazithenga ngokupheleleyo izabelo zeCírculo de Lectores kwi-2014. Nangona kunjalo, ngenxa yotshintsho kwindlela yomsebenzisi (ukuntywiliselwa okukhulu kufundo lwedijithali kunye nokufunyanwa kweemveliso ngewebhu) kwagqitywa ekubeni kuvalwe iklabhu.
UGrupo Planeta uthethile
Malunga nokushicilelwa kwe El País, Izithethi zeGrupo Planeta zibhengeze:
“Iindlalifa ziyaxelelwa ukuba, emva kokuvalwa kweklabhu yaseCírculo de Lectores, amalungelo okuthengisa ngale ndlela ahlala emoyeni. Okuza kwenziwa ngengxowa-mali kuxhomekeke kwizivumelwano ekufikelelwe kuzo ”.
Umhlolokazi wombhali uFernando Ayala naye uphakamise ilizwi lakhe
Ngokwakhe, kwaye enika inyani kwiindaba, umhlolokazi wombhali uFernando Ayala wathi:
“Le projekthi ibaluleke kakhulu ibiyimfuneko, kangangokuba ilinganise ulwimi lwesiSpanish noncwadi kunye nolweenkcubeko ezizezinye apho kukho iiprojekthi ezifanayo. Ukutshatyalaliswa kwayo kubonisa intlekele yokwenyani yenkcubeko ethi, kula maxesha, ibe ayinakulungiswa. "
Izithethi zeGrupo Planeta, ukuthomalalisa le meko, zibonise:
“Into ebithunyelwe yileta yolawulo esemgangathweni ephume ngaphandle kwabo bayilungisileyo besazi malunga nezi ngxoxo; bekungekho konke konke kwaye kungekho nasendlwini intando yokutshabalalisa nantoni na eyenye yentsapho yaseCírculo de Lectores ”.
Into eqhubekayo kwindalo esingqongileyo luxinzelelo oluphawuleka ebusweni bokwenza izigqibo ezibonakala zingenangqondo kwaphela kule nkulungwane yama-25.000. Okwangoku, amaqela anomdla anethemba lokuba impilo iya kuhlala ikhona, kuba ukugcinwa kweencwadi kuya kuba yinzuzo enkulu eSpain. Kuyasomeleza ukwazi ukuba ilizwi le-BNE linefuthe elifunekayo, ukuze iikopi ezingama-XNUMX ezisemngciphekweni (kunye nezinye izinto ezinomdla ezinomdla kwiCírculo de Lectores) zikhuselwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Ukukhanya kuvuliwe kukujikeleza ikamva leCírculo de Lectores, iThala leNcwadi laseSpain licele ukuba indawo yokugcina iklabhu idluliselwe kuyo ukuze igcinwe
UPedro Suenz sitsho
Kunzima ukuqonda ukuba kutheni uBertelsmann athengise iCírculo ngokuchanekileyo kuPlaneta, umpapashi okwinqanaba eliphantsi, engqineke engenalo nofifi lokuba iklabhu yencwadi kufuneka iqhutywa njani. Lonakalise inqanaba elikhulu kunye nodumo olufunyenwe nguCírculo kunye noHans Meinke, owayeqonda ukuba ikamva leklabhu liza kuba kupapasho lweencwadi ezenziwe kakuhle, ezinemifanekiso kunye noncwadi olusemgangathweni, kakhulu kwisitayile saseJamani iBüchergilde Gutenberg, Okwangoku yenye yeencwadi ezimbini «zoluntu lweencwadi» (Buchgemeinschaften) esele isindile kwi-voracity ka-Bertelsmann, owathi eJamani wazinikezela ekuthengeni phantse zonke ezi klabhu ukudibanisa nokuzitshabalalisa, ekugqibeleni evala i-macroclub yakhe «Der Club» (eyayisakuba nguBertelsmann Lesering> Círculo de Lectores Bertelsmann) konke ngaxeshanye. I-Círculo de Lectores, kwelinye icala, kwiintsuku zayo zokugqibela kude kube malunga. I-2005/2010, ifezekisile into eyayinokuba likamva layo: ukugcina uluntu olunamakhulu amawaka amalungu athenga iincwadi ezilungileyo. Into malunga nokuthengisa umnyango nomnyango ngokusebenzisa iiarhente yayisele iphelelwe lixesha, uninzi luthenge ngeposi. EPortugal, iCírculo de Leitores iseyinxalenye yeBertrand (iBertelsmann + Random House). Okokuba eSpain iCírculo ilahlekelwe ngakumbi nangakumbi ngamaqabane okuthenga ngenxa yolawulo gwenxa olwenziwe yiPlaneta, ngenkqubo ewohlokayo kuluhlu lweenoveli zolwaphulo-mthetho okanye iinoveli ezoyikisayo, ezihlelwe kakubi, kwaye ngaphandle kobubanzi obunikezela ngezihloko zopolitiko kunye nembali okanye ukubhengezwa okunzulu. Oko, ngaphezulu koko, yonakalisa ingxowa mali enkulu yokuhlela yeCírculo yenye yehlazo. Kwaye akukho mathandabuzo ukuba ikho enye into enokubenzakalisa: kwikomkhulu laseCatalonia, iCírculo yayiza kujongana nengxaki yokuduba iimveliso zeCatalan. Ndinqwenela ukuba umhleli onzulu aqhubeke nomsebenzi weCírculo kwinqanaba lokugqwesa kunye nokukhetha okuhle, nangona kungenakulindeleka. Inyala
Phendula kuPedro Suenz
Isandla sasekhohlo sobumnyama
Iindaba ezi-4 zokuhlelwa kwabantwana kunye nefilimu ngoDisemba